सहकारी Archives ~ Page2of 10 ~ Banking Khabar
मृतक सदस्यको परिवारलाई किसान सहकारीद्धारा सहयोग
किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड लम्की कैलालीले मृतक सदस्यको ऋण मिनाहा गरि मृतकका परिवारलाई काजकृया खर्च समेत उपलब्ध गराएको छ । संस्थाले सदस्यको सुरक्षण योजना अन्तर्गत संस्थाको नारायणपुर शाखा अन्र्तगत टिकापुर ६ भगवानपुर बस्ने केवली देवी चौधरीको मृत्यु पश्चात यस …
सहकारीको नयाँ संरचना बन्दै, डिभिजन कार्यालय खारेज हुने
बैंकिङ खबर । सहकारी विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज हुने भएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु सबै खारेज हुने भएका हुन् । हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्दै आएको सहकारी दर्ता, अनुगमन तथा …
सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र मन्त्रालयले हेर्ने
बैंकिङ खबर । सहकारी संस्थाहरुको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि बहस भए पनि सञ्चालन गर्ने निकायको विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अब केन्द्रको …
सहकारी के हो ? कहिले सुरु भयो ? कसरी छुट्याउने राम्रो सहकारी ?
बैंकिङ खबर / सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुद्वारा आर्थिक लगानी गरी सोमा व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशिल व्यवसायीक संगठन नै सहकारी हो । सहकारी एउटा यस्तो उद्यम पनि …
गरीबी निवारणका लागि सहकारी मोडलको अर्थतन्त्रमा जोड
बैंकिङ खबर । गरीबी निवारणका लागि सहकारी मोडलको अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसीए) को क्वालालम्पुर मलेसियामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन तथा साधारणसभामा सहभागी विश्वका अर्थशास्त्री र सहकारीकर्मीले यस्तो बताएका हुन् । सहकारी मोडल …
सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षमा दक्ष पौडेल नियुक्त
बैंकिङ खबर । सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षमा सहकारी अभियान्ता दक्ष पौडेल नियुक्त भएक छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पौडेललाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी ४ वर्षे कार्यकालका लागि सहअध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । बोर्डको अध्यक्ष सहकारी मन्त्री …
सृजनशील सहकारीले गर्यो १६ करोडको कारोबार
कञ्चनपुर। शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारी बजारमा रहेको सृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रु १६ करोडको कारोबार गरेको छ । कर्मचारी वोनस र आयकरको रकम कटौती गरी सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु २१ लाख पाँच हजार नाफा आर्जन गरेको छ …
देशभरीका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज हुँदै
बैंकिङ खबर । सहकारी विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज हुने भएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु सबै खारेज हुने भएका हुन् । हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्दै आएको सहकारी दर्ता, अनुगमन तथा नियमनको सबै …
सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज हुने
बैंकिङ खबर । सहकारी विभाग अन्तर्गतका सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज हुने भएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु सबै खारेज हुने भएका हुन् । हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्दै आएको सहकारी दर्ता, अनुगमन तथा नियमनको …
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने चार सुत्रहरु
टेक प्रसाद चौलागाईँ – प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित अनि संयुक्त स्वामित्व सहितको उद्यममार्फत आ–आफ्ना आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि स्वैच्छिक रूपले संगठित भएका व्यक्तिहरूको स्वायत्त संगठन नै सहकारी संस्था हो । नेपालमा गरीबी उन्मुलनको लागि सहकारी …
अरुण भ्याली हाइड्रोको एफपिओ नआउने, अघि सार्यो हकप्रद निष्काशन प्रस्ताव
बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससिटमा २० सूचक थपिए
१७.१८ अंकले परिसूचक घट्दा साढे ४० करोडको कारोबार, १७ कम्पनीका सेयरधनीले कमाए
बैंकिङ खबरले माग्यो रिपोर्टसहितका कर्मचारी
एनालग केबल टिभी अब डिजिटल बन्दै
छानीछानी दिनुस् आवेदन, हेर्नुस्, कुनकुन बैंकले मागे कर्मचारी
आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको आईपिओ फागुन १५ गतेदेखि
नेपालको पुँजी बजार : समस्या र सुधारका पक्षहरु
प्रभु बैंकमा जागीर गर्ने हो ? अनलाइनबाटै दिनुस् आवेदन
प्रविधि पछ्याउँदै सहकारी